Dhalinyaro Al-shabaab ka soo goostay oo Shaqa-abuur loo sameeyay+SAWIRRO | Baydhabo Online
Dhalinyaro Al-shabaab ka soo goostay oo Shaqa-abuur loo sameeyay+SAWIRRO
Maleeshiyaad horay uga tirsanaa Al-shabaab ayaa ka Qalin-jabiyay xarunta Dhaqan-celinta Baydhaba ee Dowlad goboleedka Koofur-galbeed Soomaaliya, kaddib markii ay dhameysteen barnaamij dhaqan-celin ah oo aad u adag, sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday Xafiiska QM ee Somalia [UNSOM].
Dhallinyarada dhaqancelinta loo sammeeyay ayaa isugu jira 20 Rag ah iyo 19 Haween ah, kuwaas oo inta ay Xarunta Dhaqan-celinta Baydhaba ku jireen qaatay Tababarro Farsamada gacanta ah iyo Tallooyin la xiriira Cilmu-nafsiga, kaasoo lugu fuliyay Maal-gelin ka timid Dowladda Jarmalka.
Sanduuqa Hawl-galka Qaramada Midoobey ee Taakuleynta Somalia, UNSOM ayaa gacan ka geystay taabo-galinta hoy-nabdoon oo loogu talo-galay in lagu dhaqan-celiyo Haweenka horay uga tirsanaa Al-shabaab oo laga Hir-geliyey Baydhaba.
Labadan Mashruuc, waxaa fuliyay Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM), Middan waa munaasabadii labaad ee ay ku qalin-jabiyaan Maleeshiyaad Al-shabaab horay uga tirsanaa tan iyo markii xaruntan laga hir-galiyay Degmada Baydhaba.
“Waxaan Baydhaba imid anigoo nafteyda u cabsanaya, Mid ka mid aah saaxiibaday ayaa ii sheegay xaruntan. Waxaan xaqiiqsaday in xaruntaani tahay meesha keliya ee aan ku bad-baadi karo. Wax badan ayaan bartay. Isbeddel dhab ah ayaa ku yimid Nolosheyda tan iyo markii aan xaruntaan imid. Waa la i soo dhaweeyay, Waxaana la i siiyey Guri iyo Cunno. Waxaase intaba iiga sii muhiimsan Tababbarka iyo La-talinta aan helay,” ayay tiri Nimca oo horay uga tirsanayd Kooxda Al-shabaab.
Sidoo kale, Batuula oo iyana horay uga mid ahayd Al-shabaab ayaa ku boorrisay deeq-bixiyeyaashu inay sii wadaan maal-gelinta mashruuca, si dhallin badan oo Al-shabaab ka tagay ay fursad uga helaan xaruntaan, iyadoo tiri, “Waxaan rabnaa in Haweenka mudnaan gaar ah la siiyo. Raggu waxay haystaan xarun shaqeynaysa. Waxaan rabnaa in haweenkana taasoo kale loo helo. Waayo dumarku waa laf-dhabarka Bulshada.
Munaasibadda Qalin-jabinta Dhallinyaradan ayaa waxaa ka soo Qayb-galay xubno ka socday dowlad gobaleedka Koofur Galbeed, oo uu ka mid yahay Wasiirka hub-ka-dhigista iyo Dhaqan-celinta Xasan Ibraahim Xuseen, Guddoomiyaha Gobolka Bay, C/rashiid C/llaahi iyo Guddoomiyaha Baydhaba C/llaahi Cali Watiin. Iyo xubno kale oo matalayay bulshada rayidka ah, Hoggaamiyeyaal Diimeed iyo Odayaal-dhaqameed.
“Maanta waa maalin weyn. Waxaan ku Guuleysannay inaan dhallinyaradan ku qancinno in ay nabadda qaataan, ayna ka waantoobaan dilka shacabka aan waxba galabsan. Waxaa jira nolol ka duwan taasi, waxay sameyn karaan Ganacsi, waxayna qayb ka noqon karaan bulsho wax-soo-saar leh,” ayuu Wasiirka Dhaqan-celinta Koonfur-galbeed.
Madaxa UNSOM DDR Officer, Patrick Loots ayaa dhallinyarada Qalin-jabisay wuxuu ugu hambalyeeyay guusha ay barnaamijkan ka gaareen, Wuxuuna shacabka ku Guubaabiyay in ay gacan ka geystaan sidii ay dhallinyaradan bulshada dib ugu dhex-geli lahaayeen.
“Tani waa maalin muhiim ah, waxaan u dabaal-dagaynaa horumarka ay dhallinyaradaan ku Tallaabsadeen, Waxaan idiin kugu Hambalyeynayaa sida Guushu ku dheehan Tahay ee aad Barnaamijkaan u dhammeyseen, Dhallinyaradan maanta Qalin-jabiyay waxay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan deegaannadoodii, ayna naftooda iyo tan dadkba anfacaan” ayuu yiri Patrick Loots.
Ugu dambeyntii, Hawl-galka Qaramada Midoobay ee Taakuleynta Soomaaliya (UNSOM), wuxuu mudaba safka hore uga jiray dhaqan-celinta dhallinyarada horay uga midka aheyd Al-shabaab iyo dhismaha xarumo sidan oo kale ah oo laga hir-galiyo magaalooyin kale ee Soomaaliya.